ညိမ်းပြည့်စုံ| November 24, 2012 | Hits:1
| | ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး အင်းစိန်မြို့နယ် အောင်ဇေယျ တံတားအနီးမှ အိမ်ရာ တခု (ဓာတ်ပုံ – friendsmyanmar.org)
မောင်မောင် November 24, 2012 - 7:29 pm ဘာ….. ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကလည်း အရှုံးခံပြီး ဆောက် မယ် ဆိုရင် .. ဟုတ်လား??
Reply komoe November 24, 2012 - 10:36 pm အခြေခံလူတန်းစားကိုကြည့် ပါအားနည်းသူတွေကိုငဲ့ငြာပါ သာမန်ပြည်သူတွေရတဲ့လစာနဲ့ တွတ်ကြည့်
Reply pps12345 November 24, 2012 - 10:58 pm နိုင်ငံ တကာတွင် တန်ဖိုးနည်း တိုက်ခန်းများကို သာမန် ဝန်ထမ်းမိသားစု များ၏ ဝင်ငွေကို တိုင်းတာကာ လူတိုင်း ဝယ်နိုင်ရန် ဆောက်လုပ်ပေးလေ့ရှိပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့မှာက သာမန်ရတဲ့လစာက တစ်သိန်းကျော်၊ လင်မယား နှစ်ယောက်ပေါင်းရင် နှစ်သိန်းကျော် ဆိုတော့ တိုက်ခန်း ၁ခန်းတန်ကြေးက လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်း ၁၀နှစ် လစာ စုစုပေါင်းထက် နည်းမှပဲကောင်းမှာ။ သိန်း ၂၄၀ အောက်မှ ကောင်းမှာပါ။ ၁၄၀ သိန်းက စတယ် ဆိုတော့ နိုင်ငံတော် အစိုးရ ကိုတော့ ကျေးဇူးတင်သင့်ပါတယ်။
Reply ဒဂုံသား November 25, 2012 - 2:51 am အော် ပြည်သူတွေအတွက် တန်ဘိုးနည်း အိမ်ယာဆိုတာ သိန်း ၁၄၀ ဆိုပါလား ကြည့်လည်း လုပ်ပါအုံး စည်ပင်ရယ် တစ်လ ၅ သောင်းသာ ဖြတ်ရင် လစာနည်း ၀န်ထမ်းတွေ ရေတောင် သောက်နိုင်ပါ့မလား
Reply KO THIHA November 25, 2012 - 11:16 am အလွန်ကောင်းမွနသောသတင်းပါ။
Reply Soe Nyunt November 25, 2012 - 2:52 pm It should cost maximum US 10000 .
Reply MMM November 28, 2012 - 2:59 am နေပြည်တော် ၀န်ထမ်းအိမ်ယာစီမံကိန်းအတွက်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်မှာ ၀ရံတာရောလူပါ ပြုတ်ကျသွားတာ ဖြစ်ဖူးပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကန်ထရိုက်တာနဲ့ စည်ပင် လက်ခုပ်လက်ဝါးရိုက်စားကြရင် ..(ဆက်စဉ်းစားကြည့်ကြပါ။)
Reply polite June 18, 2014 - 12:17 pm အခုဖြစ်နေတာက တန်ဖိုးမျှတဆိုပြီး သိန်း(300)ကျော်သွင်းရမှာဖြစ်နေတယ်. အရစ်ကျစနစ်မဟုတ်ဘဲ လက်ငင်း ငွေချေစနစ်နဲ့ တစ်ပတ်အတွင်းပေးရမယ်လို့ ပြောနေတယ်။ မဲပေါက်တာက ၀န်ထမ်းတွေ ဆိုတော့ ဘယ်လိုပိုက်ဆံသွင်းရမှာလည်း ကြည့်လုပ်ကြပါအုံးနော်